Semalt: Iyintoni Ikhonkco loLwazi lweZibambano. Iimpawu ezihlukileyo ze-Online Scraper
Ikhasi elixhamlayo Izixhobo zokuqhawula izixhobo zichonga iikhowudi ze-HTML zesayithi kunye nezicatshulwa ezivela kumaphepha ewebhu ahlukeneyo.Xa idatha ichithwe ngokupheleleyo, ibonisa izixhumanisi ngendlela yobhaliweyo kwaye yenza umsebenzi wethu ube lula. Esi sikhokelo sekhompyutheni ye-intanethi ayilungele kuphela iinqununu zangaphakathi kodwa ibonisa iimpawu zangaphandle kwaye iguqula idatha kwifomu efundekayo. Ukulahla ukuxhomekeka kuyindlela elula yokufumana izicelo ezahlukeneyo, iiwebhusayithi kunye nobuchwepheshe obusekelwe kwiwebhu. Injongo yePhepha leNgcaciso yeCrafishing is to scrape information from sites different. Yakhelwe ngethuluzi lomgca lomyalelo ogqityiweyo nolungqalileyo ogama linguLynx kwaye lihambelana nazo zonke iinkqubo zokusebenza. I-Lynx isetyenziselwa ukuvavanya nokujongana neengxaki zewebhu kumgca womyalelo. Iziqhagamshelwano zekhasi ziyisixhobo esinesixhobo esasikhuliswa ngo-1992. Isebenzisa iinkqubo ze-Intanethi kuquka i-WAIS, i-Gopher, i-HTTP, i-FTP, i-NNTP, kunye ne-HTTPS ukuze wenze umsebenzi wakho wenze.
Iinkalo ezintathu eziphambili zesixhobo:
1. Idatha ye-Scrape kwi-Multiple Threads:
Ukusebenzisa ikhonkco zekhasi ukukhangela ithuluzi , unokwenza okanye ukhiphe idatha kwiintambo ezininzi. Abaqheqheli abaqhelekileyo bathatha iiyure ukwenza imisebenzi yabo, kodwa esi sixhobo siqhuba imiqulu emininzi ukukhangela uphendule ama-web pages angama-30 ngeli xesha kwaye ungonakali ixesha lakho namandla.
2. Ukukhupha Iinkcukacha kwiiWebhsayithi eziDynamic:
Amanye amasayithi asebenzayo asebenzisa iindlela zokulayisha idatha ukudala izicelo ezinjenge-AJAX. Ngaloo ndlela, kunzima kwinqanaba eliqhelekileyo kwi-web scraper ukukhipha idatha kwizo ndawo. Ikhonkco Uluhlu lwe-Scraping, nangona kunjalo, lunempawu ezinamandla kwaye lunceda abasebenzisi ukuba bavune idatha kwiindawo ezimbini ezisisiseko kunye ezinamandla. Ukongezelela, esi sixhobo sinokukhipha ulwazi kwiziko leendaba zoluntu kunye nemisebenzi ehlakaniphile ukuphepha i-error 303.
3. Ulwazi lokuthumela ngaphandle kwiphina ifomathi:
Ikhasi Ikhonkco lokuCoca ixhasa amafomathi ahlukeneyo kunye nedatha yokuthumela ngaphandle kwifom ye-MySQL, i-HTML, i-XML, i-Access, i-CSV kunye ne-JSON. Ungaphinde ukopishe uphinde unamathisele iziphumo kwiMqulu yeLizwi okanye ulandele ngqo iifayile ezikhishiwe kwi-hard drive yakho. Ukuba ulungelelanisa izicwangciso zaso, iphepha lidibanisa ithuluzi lokutsala liya kulanda idatha yakho kwi diski yakho ngokuzenzekelayo kwifom echazwe ngaphambili. Ungasebenzisa le datha ungaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye unokuphucula ukusebenza kwendawo yakho kwizinga.
Indlela yokusebenzisa le sixhobo?
Umele ufake i-URL uze uvumele le sixhobo ukwenza umsebenzi walo. Kuya kuqala ukuhlalutya i-HTML kwaye iya kukhanda idatha kuwe ngokusekelwe kwimimiselo yakho kunye neemfuno. Iziphumo zivame ukuboniswa ngoluhlu lwezintlu. Emva kokuba iinqonkqo zichithwe ngokupheleleyo, uphawu luyakuboniswa kwicala lasekhohlo. Ukuba ufumana umyalezo "Akukho ziqhagamshelo ezifunyenweyo" mhlawumbi kuba i-URL oyifakile yayingavumelekile. Qinisekisa ukuba ungene i-URL yangempela ukukhipha izixhumanisi ukusuka. Ukuba awukwazi ukukhipha izixhumanisi ngesandla, enye inketho kukusebenzisa i-APIs. I-API isetyenziswe kwindlela yentengiso kwaye ilawula amakhulu emibuzo ngeyure kubasebenzisi Source .